Kratom dia zava-maniry voajanahary izay efa mahazo be dia be vita ho amin'ny US maro milaza. Maro ny olona any Illinois misaintsaina ny fanjakana na dia hamela azy ireo manararaotra ny fampiasana izany tena mitady ny zava-maitso. Amin'izao fotoana izao, vovoka sy nalaina endrika Kratom mbola misy amin'ny Illinois, ary ny governemanta federaly mbola mihevitra ireo karazana ny zavatra ho ara-dalàna. Midika izany fa tsy mampaninona izay tanàna any Illinois ianao any Chicago, na any an-kafa--ianao dia mbola afaka mividy sy mampiasa Kratom. Hamaly io lahatsoratra io ny lafin-javatra ara-dalàna Kratom vokatra sy zava-baovao momba ny fomba hividianana ny zava-maitso ao an-toerana.
Kratom Lalàna any Illinois
Izany dia midika hoe tsy mahagaga Kratom ara-dalàna any Illinois, dia ny toetry fantatra amin'ny filozofia ny fahalalahana manokana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy lalàna iray fanaraha-maso, na mametra ny fampiasana ny zavamaniry sy ny Sampanteny. Tsy misy fetra ny fomba maro ny zavatra azo novidina, ary tsy misy resaka ny miezaka ny hametraka lalàna momba ny fampiasana ny zava-maitso ho ela - farafaharatsiny amin'ny sehatra-panjakana. Ao amin'ny sehatra federaly, misy hery ao amin'ny FDA izay te-hanakana ny Amerikana tsy ho afaka hampiasa izany zava-maitso, fa ankehitriny izao dia ara-dalàna sy tsy voafehy.
Izany dia midika hoe afaka mividy, eo amin'ny stash, ka handevona Kratom betsaka araka izay tianao. Ary nahoana no tsy ho izany satria Kratom dia voajanahary ahitra maro be vokatry mahasoa? Rave mpanjifa momba ny zava-maitso izany no tena nihatsara ny fahasalamany sy ny hankafy ny fiainany. Ny olona no nampiasa azy io mba hampitombo ny heriny, mba hanamaivanana ny fanaintainana, mba hampifantoka ny sainy, mba hanamaivanana ny fanahiana, ary mba hiadiana amin'ny fahaketrahana. Mihitsy aza izy io ampiasaina mba hanampiana wean mpifoka rongony eny amin'ny fanaintainana fanafody sy akora hafa opiate amin'ny fanalefahana fialana soritr'aretina.
Kratom sy ny FDA
Ianao mety tsy ho azony an-tsipiriany vaovao na fampiasana vaovao avy any amin'ny toerana izay mividy izany. Ny antony dia satria misy ny sasany FDA fitsipika io tany io famerana ny toerana izay mivarotra Kratom. Izao dia izao, Kratom dia tsy heverina ho FDA ankasitrahan'Andriamanitra zavatra. Ary tsy ho vetivety noho ny tsena voafetra ho ny vokatra sy ny tsy fahampian'ny $100 tapitrisa vonona hanampy amin'ny fankatoavana ny FDA dingana.
Na dia teo aza ny porofo voaporofo ny fahombiazana ny zava-maniry, tsy misy olona afaka mivarotra ny vokatra sy mirehareha ny tombontsoa ara-pahasalamana satria tsy ny FDA Kratom aoka ho dokam-barotra toy ny zavatra natao ho an'ny olombelona fanjifàna. Izany amin'izao fotoana izao, Tsy maintsy marketed toy ny fikarohana na ethnobotanical Zavatra fananana satria tsy azo voalaza ho toy ny lany fananana. Na izany aza, izany mbola tsy mitandrina ny olona tsy hampiasa ny ahitra tahaka ny hitany fa mety.
Aiza ny Buy Kratom any Illinois
Kratom amidy amin'ny vovoka, nalaina, ary ny capsule amin'ny endrika maro ny tsena sy ny setroka fivarotana any Illinois. Afaka Google hitady Kratom ary azo inoana fa hahita mpivarotra eo amin 'ny manodidina. Na dia izany Toa hevitra tsara manana toeram-doha na eo an-toerana eo amin'ny manodidina retailer, tsy manoro hevitra anareo mba handeha fa lalana, satria mba hiafara tanteraka ny fandoavana vidin'ny amin'ny mpivarotra an-toerana. Eto no mahatonga…
Levitra izany Online
Faritra Chicago indrindra magazay mivarotra ny ravina Kratom amin'ny eo $5 - $15 isan-levitra satria cater bebe kokoa ny "avo ara-dalàna", ary koa ny vahoaka manana ambony kokoa noho ny vola lany amin'ny ara-batana nihazakazaka fivarotana. Online, afaka baiko toy izany amin'ny vidiny ambany be isan-levitra (toy ny $0.50 ny $2.00). Brand anarana OPMs Kratom capsules mivarotra amin'ny roa levitra for $15.95 ao amin'ny fivarotana. Afaka mahazo ny mitovy amin'ny hafa ihany no marika fa ny ampahany amin 'izany sarany amin'ny aterineto. Raha mividy amin'ny ampahany, hitanao na dia mora efaha amin'ny isam-miandry anao ao amin'ny aterineto
Ianao koa mila miahiahy ny fahazoana stale sy B-kilasy rehefa hividy vokatra avy amin'ny fivarotana an-toerana, izay mihoatra na tsy manana somary voafetra ny fifantenana ny Kratom teny. Ny eo an-toerana ihany no toeram-pivarotana dia liana amin'ny fiezahana mba hivarotra ny marika anarana. Dia tsy miezaka ny hametraka avo lenta Kratom amin'ny toeram-pambolena any Asia fanta-daza. Izany no mahatonga dia mampiseho ny hisarika ny sain'ny olona ho amin'ny aterineto mpivarotra javamaniry izay misahana ny zava-maitso izany ka atero ho tsara kokoa ny vokatra tsy misy marika rehetra anarana saritaka. Be dia be ny orinasa ireo maimaim-poana na nihena ny tahan'ny fandefasana entana any Illinois, ary afaka manantena ny fonosana ho tonga any Chicago ao anatin'ny andro. Ny vola lany amin'ny Kratom dia ambany dia ambany miankina amin'ny firy grama ny vovo-ampiasainao amin'ny mitohy fototra.